DIGIRTA DIGIRTA XILLIGA QABOOBAHA: CUNTADA UGU FIICAN EE KARISKA EE GASACADAHA - DIGSIYADA
Digirta waa marti naadi ah laakiin marti aad u muhiim ah miiska. Biyo la kariyey, qasacadaysan, qasacadaysan. Ahaanshaha ilaha waxyaallaha badan ee faa'iido leh, waxay noqoneysaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee cuntada.
Ka fikir sida loo diyaariyo digirta jiilaalka dhowr siyaabood.
Nooc gaar ah oo fiitamiino iyo xubno ayaa tilmaamaya baahida loo qabo joogitaanka dhadhanka cuntada. Guryo waxtar leh:
birta ku jirta halabuurka waxay hagaajisaa habka wareegga dhiigga;
ilo wanaagsan oo borotiinka ah ee jir-dilka jirka;
dib u soo celinta dheef-shiid kiimikaadka, waxay hagaajisaa maqaarka, timaha iyo ciddiyaha;
magnesium wuxuu kordhiyaa iska caabinta cadaadiska iyo hagaajinta hurdada;
Baro wax badan oo ku saabsan ka kooban iyo faa'iidooyinka digirta ee jidhka: caddaan, madow, casaan, dhir.
Diyaarinta gasacadaha iyo daboolka
Wax kasta oo loo isticmaali doono qashinka waa in si fiican loo dhaqo. Haddii bangiyada la isticmaalo, waa in si taxadar leh loo dhaqo.
Maanta, hababkan soo socda ee sterilization waxaa loo isticmaalaa karinta:
Steamed. Nooc waxaa lagu rakibay dheriga karkaraya. Dheriga waxaa la dhigayaa shabaqa, kaas oo laga shaqeynayo 10 ilaa 20 daqiiqadood, iyadoo ku xiran mugga.
Foornada. Kuleylka foornada ilaa 160 ° C. Ku rid bangiyada iyada. Qabo 10 daqiiqo. Ma aha lagama maarmaan in si dhaqso ah looga saaro suxuunta, si looga fogaado xiriirka degdegga ah ee dhalada kulul leh hawo qabow.
Mashiinka microwave. Ku shub biyo qaar god leh. Ku rid microwave heerkulka ugu sarreeya oo ku rid dhalooyinka. Waqtiga la shaqaynayo - 10 daqiiqo.
Ma taqaanaa? Awoodda gaarka ah ee soodhaweynta si loo yareeyo waxqabadka sheyganka ayaa si ballaaran loo isticmaalaa warshadaha cuntada. Gurigani wuxuu ka dhigayaa mid soodhaha leh oo loogu talagalay diyaarinta dhalooyinka loogu talagalay sterilization. Soodisku kama tago urka oo aan dhib lahayn jirka. Markaad shaqeyneysid gasacadaha, isticmaal sponge cusub: kuma jiraan jeermiska, urta iyo cuntada ka hadhay.
Caanaha, daboolooyinka birta ayaa lagu kariyaa biyo karkaraya 10 daqiiqo. Koofiyadaha gacanta waa in isla markiiba la isticmaalo.
Salad leh khudaarta
Mid ka mid ah saladhaha ugu caansan ee xilliga qaboobaha waa digirta khudaarta. Waxaa loo cuni karaa sida saxar gooni ah oo loo isticmaalo saxan dhinaca. Salad Tani waxay ku siinaysaa dhammaan fitamiinada iyo walxaha adag, taas oo si gaar ah faa'iido leh xilliga jiilaalka.
Waxyaabaha Loo Baahan Yahay
yaanyada - 1.5 kg;
digirta, basbaaska macaan, basasha, karootada - 0.5 kg;
100 g oo sonkor ah iyo 50 g oo cusbo ah;
toon - 1 madax;
saliid gabbaldayaha - 1 koob;
2 qaado oo 9% khal.
Miisaanka dhammaan khudaarta ayaa lagu qeexay qaabka la nadiifiyey.
Baro cuntada sida khudaarta goosashada: khudaarta kala duwan; basasha, toonta, karootada (caviar, barafaysan, la qalajiyey); tamaandhada (cagaaran, cusbada jilicsan, iyo saliid, salad, juuska yaanyo, ketchup, baastada, saladh, salad, tamaandhiga casiir ah, yaanyada, shimbiraha, Yum Fingers, adjika).
Digirta si aad u kala soociso oo ka saarto nuqulada la jabiyay (xayiray, la soco cayayaanka, iwm.). Ku shub biyo qabow qabow. Haddii hadhuudhku ay yar yihiin, markaa waa ku filan in ay ku dhufato dhowr saacadood.
Inta kale ee khudaarta waa la dhaqay, diiray, iyo miraha waa la jaraa. Tamaandho la jajabiyey.
Digirta ku rid digsi karinta salad. Ku dar khudaarta haray.
Ku dar saliid gabbaldayaha, cusbo iyo sonkor.
Walaaq, isku karkari.
Karso ilaa inta la sameeyo. Dhamaadka karinta ayaa ku dar sokor iyo khal.
Walaaq oo u kari 5-10 daqiiqadood oo kale.
Waxaan ku faafin saladhka barmiilka pre-jeermiska iyo u duub.
Waa muhiim! Caadiyan qashinka waxaa ka buuxsamaya qoorta. Tani ma aha mid gebi ahaanba sax ah, maaddaama hawo badan oo hawadu ay mugdi gali doonto lakabka sare ee badeecada. Sidaa darteed, mugga optimit waa buuxinta suurtagal, ma gaadho qarka 1-2 cm.
Video: digirta digirta ee yaanyo
Cunto fudud oo cajiib ah, iyo sidoo kale saxan khudradeed oo madax-bannaan. Waxaa la cuni karaa kulul ama qabow.
1.5 kg oo digir ah;
200 gram oo walxo ceeriin ah waxaad u baahnaan doontaa 2 qaado oo ah dhogorta yaanyo;
25-50 g oo cusbo ah;
Isku soo mar, qaado digirta la dumiyay. Si fiican u raac biyo kulul. Ku dabool biyo iyo ka bax inaad bararto. Tani, digirta cusub waxay ku filan tahay 2-3 saacadood. Haddii digirta ay da 'yihiin - u dhaaf biyo qabow.
Biyo raaci biyo.
Baro mid kale oo lagu kariyo digirta digirta yaanyo - khudradda.
Buuxi biyo 2 cm ka sarraysa heerka qalabka ceeriin iyo dabka ku shub.
Markuu karkariyo, ku dar jajab yaanyo digsi ah.
Karkari ugu yaraan 0.5 saacadood ilaa iyo inta la diyaarinayo.
Isku dar cusbo oo isku kari dhowr daqiiqado dheeraad ah.
Waxaan ku soo saareynaa shaqada shaqada ee daasadaha kulul ee sterile. Buuxi kari, ku dar 1 qaado oo khal.
Is dabaji koofiyadaha nadiifsan.
Video: ilaalinta bean ee yaanyo
Salad Giriig ah oo leh digir ah jiilaalka
Muuqaal khaas ah oo salad this waa digir cad. Guryaheeda gaarka ah waxay hagaajineysaa shaqeynta nidaamka wareegga dhiigga. Saladku wuxuu noqon doonaa mid aad u faa'iido leh dadka qaba infekshanka yar ee hemoglobin iyo dheef-shiid kiimikaad hooseeya.
1 kg oo digir ah, basal, basbaas macaan, karootada;
2.5 kg oo yaanyo ah;
1 koob ama wax yar oo saliid ah oo khudradeed;
2 madax oo toon;
1 poodh oo ah basbaas qadhaadh ah;
1 qaado oo cusbo ah;
2-3 qaado oo sonkor ah;
1 qaado oo khal ah ilaa 3 litir oo isku dhaf ah.
Beerka ayaa la kala soocayaa, maydhay, qooyay ka hor barar. Marka xigta, daadi biyaha, raaci kari kari ilaa kiilo diyaar. Ku dhaq khudaarta, diirka, googooyi. Tamaandhada waxay u baahan yihiin in ay ka saaraan maqaarka oo ay googooto sheyga.
Waa mid xiiso leh in laga akhriyo waxyaabaha ku saabsan faa'iidooyinka iyo cuntooyinka ee digirta cagaaran (keydinta), iyo sidoo kale hantida iyo ilaalinta hadhuudhka.
Digirta ayaa isku dhajin leh yaanyada lana googooyaa 30 daqiiqo.
In weel gaar ah, isku daraan saliidda gabbaldayaha, cusbo, sonkorta.
Ku dar khudaarta.
Dabool daboolka iyo fuudka ilaa khudaarta la kariyey.
Isku dar miro khudaarta iyo yaanyo, isku dar.
Isku kari 5 daqiiqo oo kale.
Ku dar dhir: khal, basbaaska madow, toon.
Sii kari karee 10 daqiiqo oo kale.
Waxaan ku faafin karnaa saladhka dhalooyinka nadiifka ah, xir daboolka iyo duubka.
Video: Cunto-Salad Giriig ah oo leh khudaar iyo digir
Waa muhiim! Koritaanka iyo horumarinta bakteeriyada waxay sababtaa in ka badan sonkorta ama milixda. Si looga fogaado dhibaatooyinka ay keenaan maaddooyinka xad-dhaafka ah ee badeecadan, khal-qashinka waxaa loo isticmaalaa caanaha. Kaliya ku dar dhammaadka. Tani waa inay ka hortagto horumarinta sheyga.
Labbiska dharka isweydaarsiga jiilaalka
Xilliga jiilaalku nagama raaxaysto kala duwanaanshaha khudradda. Diyaarinta khudradda ee jiilaalka caawinta si ay u buuxiyaan kaydka fitamiinada miiska. Labbiska dharka baaskiilku wuxuu dhigi doonaa saansaankani dhadhanka iyo hodankiisa, sidoo kale wuxuu kuu hayaa dhadhan cajiib ah ee kala duwan ee noocyada khudradda cagaaran.
1.5 kg oo ah xididdo iyo yaanyo;
0.5 kg oo ah basbaas macaan, karootada, basasha;
300 g oo digir ah iyo saliid qudaar ah;
80 ml oo ah 9% khal.
3 qaado oo sonkor ah.
Ma taqaanaa? Taariikhda asalka ah ee digirta - mid ka mid ah kuwa ugu qarsoon. Waxaa la aaminsan yahay in aanu ognahay kala duwanaanta dhaqameedka laga keenay Maraykanka. Laakiin noocyada duurjoogta ah ee warshadkan lagama helin ilaa hadda.
Kala sooc digirta, biyo raaci biyo iyo qoyan habeen. Biyo, raaci oo karkari ilaa ilaa nus diyaar ah. Ku dhaq khudaarta, diirka, jarjar xaleef. Caji yaanyo.
Ku shub tamaandhada iyo saliidda gabbaldayaha gali digsiyada loogu talagalay dhajinta dharka. Walwal. Geli dabka oo isku karsaaraya.
Ku dar xididdo, khalkii badh. Karso 10 daqiiqo.
Iyadoo u dhaxaysa 10 daqiiqo, ku dar basasha iyo karootada, kadibna basbaas, digir, cusbo iyo sonkor.
5 daqiiqo ka hor dhamaadka karinta cuntada ku dar qaybta labaad ee khal.
Waxaan dharka u gelineynaa dhalooyinka barafka ah ee diyaarka u ah oo u darso kabaha nadiifka ah.
Bangiyada ayaa daboolaya ilaa qabow.
VIDEO: Cuntada lagu kariyo baakado leh digirta
Maxaa kale oo ah digirta isku dhafan?
Isu waafaqsanaanta digirta dufanka waxaa la bixiyaa iyada oo joogitaanka dareeraha-dufanku. Tan iyo sidoo kale waa ili ah oo borotiin ah, waxaa si buuxda loogu daraa cagaarka iyo khudaarta cagaaran.
Ma taqaanaa? Cuntada xaddidan (RS1) ee ku jirta miro dufan ayaa saameyn ku leh microflora mindhicirka, waxay xoojisaa nidaamka difaaca waxayna xakameysaa heerka sonkorta dhiigga. Cunto-wareedkan sidoo kale wuxuu si fiican u xakameynayaa dareenka gaajada.
Guryaha gaarka ah ee digirta waxay ku siiyaan meel sharaf leh suxuun kasta oo khudradda ka mid ah, suxuunta iyo diyaarinta jiilaalka.